အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ အထူးချွှန်ဆုံးသော ထရိတ်ဒါတွေထဲက တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ - William Gannအကြောင်း ကြားဖူးပါသလား? သူဟာ ဂြီသြမေထရီ၊ နတ်က္ခတဗေဒ နဲ့ ရှေးဟောင်း သင်္ချာနည်း တွေသုံးပြီး ဈေးကွက်မှာ ငွေကြေးအတွဲတွေရဲ့ ရွေ့လျားမှုကို ခန့်မှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် လူသိများပါတယ်. သူ့က ဆင်းရဲ့တဲ့ မိသားစုကနေ ကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်.
လယ်ထဲမှာ အလုပ်ဆင်းရင်းငွေရှာခဲ့ပါတယ်. နောက်ပြီး ဆေးလိပ်နဲ့ သတင်းစာ ရောင်းရဖို့ ရထားပေါ် သွားရောင်းခဲ့ရပါတယ်. ခရီးသွားတွေဆီကနေ သူက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအကြောင်း၊ ငွေကြေးဈေးကွက်အကြောင်း နဲ့ ထိုအရာတွေရဲ့ အကျိုးကိုလည်း သိခဲ့ပါတယ်. Gann က အနာဂတ်ကို ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ခြေရှိမလားလို့ စတင်စဉ်းစားလာခဲ့ပါတယ်. နောက်တော့ New York ကို ပြောင်းရွှေ့ကာ Wall Street ဘရုတ်ကာဝန်ဆောင်မှုရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ညမှာ စီးပွားရေးကျောင်းကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်. အနာဂတ်ကို ခန့်မှန်းရမရဆိုတာ သူ့ခေါင်းထဲ မှာ အမြဲစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်. ဒါ့နောက် သူက ငွေကြေးတွေရဲ့ အခြေအနေတွေအကြောင်း အခြေခံကျကျလေ့လာရင်း ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ထပ်စောင်းလေ့လာခဲ့ ပါတယ်. ထို့နောက် ရှေးဟောင်း ဂြီသြမေထရီ၊ နတ်က္ခတ် နဲ့ သင်္ချာပညာတွေကို ဆက်လက် ဆည်းပူးခဲ့ ပါတယ်. နောက်တော့ သူရဲ့ ရည်မှန်ချက်တွေအောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်. သူက အောင်မြင်တဲ့ ထရိတ်ဒါတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး ဒေါ်လာ သန်း၅၀ ကျော် အမြတ်ရရှိကာ ကိုယ်ပိုင် ဘရုတ်ကာဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အောင်မြင်ခြင်း လျို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ထုတ်ရှာဖွေရင်း ထရိတ်ဒါတွေက သူ့ရဲ့ စာတွေကို လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်. အဲ့နောက် ရှာဖွေတွေ့ရှိလာတာက ထိရောက်တဲ့ ထရိတ်ဒင်း tool နဲ့ နည်းဗျူဟာတွေပါပဲ. ဒီဆောင်းပါးမှာ လူသိများတဲ့ Gann အင်ဒီကေတာ(လိုင်း၊ ထောင့်၊ fan)တွေကို လေ့လာကြည့်မှာပါ. ထိုကနေ သင်ကိုယ်ပိုင် ထရိတ်ဒင်းနည်းကို တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်.
Gann အင်ဒီကေတာတွေ ဘာကြောင့် အဖိုးတန်တာလဲ?
ထိုအရာအကူအညီနဲ့ ထရိတ်ဒါက support နဲ့ resistance လိုင်းတွေကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်.
Gann angle နဲ့ line (ထောင့်၊ လိုင်း) တွေကို တူးစွကြည့်ခြင်း
အခြေခံကျတဲ့ Gann ထောင့်( angle) တွေက 1x2, 1x1 နဲ့ 2x1 တို့ဖြစ်ပါတယ်. 1x2 က အချိန် ၂ယူနစ်တိုင်းမှာ ဈေး ၁ ယူနစ် ရွေ့သွားတဲ့ ထောင့်(angle) ကို ဆိုလိုပါတယ်. အခြားထောင့်တွေလည်း ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲ. ပထမဂဏန်းက ဈေးအကွာဝေးအရွေ့ကို ပြောပြီး နောက်ဂဏန်းက အချိန်ယူနစ်ကို ပြောတာပါ.
1x1 (၄၅ ဒီဂရီထောင့်) တွင်ထရိတ်ခြင်းဖြင့် Gann လိုင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ဈေးကွက်က ဘက်ညီနေတာကိုပြပါတယ် (Gann လိုင်းက ရေရှည် trend လမ်းကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်). ဈေးက ဒီမျှခြေကို ဖြတ်သွားရင် အားကောင်းတဲ့ trend က ပြန်အားနည်းတော့မှာကို ဆိုလိုပါတယ်.
Gann လိုင်းနှင့် Gann ထောင့်များ တည်ဆောက်ကြည့်ခြင်း
Insert-Lines-Trendline by angle ကို ထရိတ်ဒင်း ပလက်ဖောင်းရဲ့ toolbar မှာ ရွေးပါ. ပြီးရင် အပေါ်ကဖြစ်ဖြစ် အောက်ကဖြစ်ဖြစ် ၄၅ ဒီဂရီထောင့်နဲ့ လိုင်းဆွဲလိုက်ပါ.
အတက် trend လိုင်းအတွက် အောက်ပါအတိုင်းပုံပေါ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ မျှခြေ ၄၅ ဒီဂရီလိုင်းက support အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်. (အရိပ်အမြွက်: သင်လိုင်းဆွဲပြီးနောက် ထိုလိုင်းကို သင်လိုအပ်တဲ့ ထောင့်အထိ လှည့်လိုက်ပါ ... အခုဆို ၄၅ ဒီဂရီပေါ့).
သင့်ရဲ့ မျှခြေဖြစ်နေတဲ့ 1x1 လိုင်းဆွဲပြီးတာနဲ့ Gann fan ကို သင် ခင်းကျင်းနိုင်ပါပြီ.
Insert – Gann – Gann fan ကို ရွေးပါ. စောနကဆွဲခဲ့တဲ့ Gann လိုင်းနဲ့အညီ fan ကိုဆွဲပါ. fan လိုင်းရဲ့ အလယ်က ၄၅ ဒီဂရီ Gann လိုင်းနှင့်အညီ ဖြစ်သင့်ပါတယ်.
အတက် trend လိုင်းအတွက် အောက်ပါအတိုင်းပုံပေါ်ပါတယ်. Gann fan ရဲ့ လိုင်းတွေက သင့်ရဲ့ support level ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်.